SomaliNet Magazine: ABRIIL 2002
ARIMAHA BULSHADA - CARRUURTA SOOMAALIYEED EE QURBAHA IYO DHIBAATADA AABBE LA\_'AANTA
Dhibaatooyinka ugu waawayn ee qurbaha?gaar ahaan Maraykanka?lagala kulmay waxaa ka mid ah ?Burburka Qoyska? ama ?Carruurta hal waalid kaliya la nool?. Waxaa jira carruur badan oo Soomaaliyeed oo Qurbaha ku nool oo mid ama labadoodii waalid ay ku dhinteen dagaalkii xaq-darrada ahaa ee Soomaaliya; wax
DIINTA - 70-KA DANBI OO UGU WAAWEYN DIINTA ISLAAMKA
Diinta 70-ka Danbi oo ugu Waaweyn Diinta Islaamka Ahmed N. Osman Qaybtii koowaad waxaan ka soo sheekaynay Shirkiga labadiisa qaybood, Shirkiga weyn iyo kan yar.
Danbiga Labaad: Dilka (In uu qofku qof dilo)
Waa danbi aad u weyn in qof dilo qof kale, Ilaahayna marar badan ayuu uga
ARRIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH: QABIIL AYAA DUMIYEY QOYSKAYGII!
Qabiilka iyo ku dhaqankiisa waxaa ay jirtay muddo iyo qarniyo badan waxaana uu qeyb ka ahaa nolosha ummaddahii inagga horreeyey iyo kuwa iminka jiraba. Sidaas darteedna ma ahan ku dhaqankiisu wax lala yaabo. Qaar kamid ah aayadaha Quraanka kariimka ah ayey ku xusan yihiin in muhimadd
DHAQANKA - XUSHMAYNTA ERGADA
Dhaqan waa garasho ururtay iyo garaad hanaqaadey oo ay ummaduhu caadeystaan. Wax kasta oo uu aadanuhu garto dabadeedna uu qeexo, isaga oo garaadkiisa la kaashanaya, waxaa la oran karaa waa dhaqan. Falka la caadeysto ee dhaqanka ah, waa mid uu facba u gudbiyo faca ka dambeeya, taas oo dowr xoog leh o
FANKA IYO SUUGAANTA GABAY: MIYI IYO MAGAALO
Labo nin oo midna reer magaal yahay midna reer miyi ayaa isu gabyay iyadoo midba uu ammaanay nolosha uu isagu ku nool yahay uuna dicaayadaynayo nolosha kale.
Wallee daacufloow reer miyaan docna garanaynin
Dab la shiday aroortii hadduu daamanka isdhaafsho
Doqonimo waa wuxuu cadki
XAALADDA QAXOOTIGA MARAYKANKA WIXII KA DAMBEEYEY SEPTEMBER 11
Subaxnimadii bishii September 11, 2001 waxaa qaar ka mid ah madaxda dowladda Maraykanka u socday shir looga hadlayay sidii loo fududayn lahaa nidaamka qofka qoxootiga ah ama sharci la?aanta ku daggan dalka maraykanka uuna u heli lahaa degganaanso rasmi ah (permanent Residence). Waxaa taas xigay lab
Qaybihii hore waxaan la soconay Ayaan iyo Faysal oo akhbaar kala helay, kaddib markii ay in badan kala maqnaayeen. Ayaan oo Australia ku nool wadaad ah, xaas ah, hooyo ah, nin wadaad ahina qabo, nolosha ay ku nooshahay aan ku faraxsanayn. Faysal oo USA ku nool, balwad yeeshay. Labadub
ARRIMAHA BULSHADA - SIDEE XAL LOOGU HELI KARAA YARAANSHAHA GUURKA?
Waxaan ogsoonnahay in wax kasta haddii sidii ay ku fiicnaayeen laga baddalo ay xumaadaan, taas macnahedu ma ahan in qofku uu isku baddalo waqti yar isaga oo in uu ka tago waxa kasta oo maguuraan ah u heeysta ilbaxnimo.
Haddii aan usoo noqono xal u helidda yaraanshaha guurka, waxaan u ma
DIINTA - SU’AALIHII UGU YAABKA BADNAA OO LA WAYDIIYAY SHIIKH CABDULLAAHI AL-NUURI IYO JAWAABOHOODII
Qaybtii koowaad waxaan la soconay jawaabtii uu Sh. Cabdullaahi ka baxshay labadii nin oo dilay wiilka yar oo ay abtiga u yihiin. Qaybtii labaad waxaan la soconay qisadii gabadhii jeclaatay ninka odayga ah kaddibna diidday in ay nin kale guursato.
TAARIIKHDA - DAGAALKII SOOMAALIYA IYO ETHIOPIA(1977)
Inkasta oo uu nidaamkii dowladda soomaaliyeed ahaa mid keligii talis ah, misana xilligaas waa uu uga naxariis badnaa dadkiisa marka loo eego nidaamkii Itoobiya ka jiray. Jeneraal Siyaad wuxuu darajadii ka qaaday odayaashii siyaasadda ku jiray dhammaantood, isaga
SOMALIDA QURBAHA - MURAN KA TAAGAN SOOMALIDII MARAYKANKA LAGA DHOOFIYAY
Qofka Soomaliga ah markii uu maqlo erayga ?Tarxiil? (musaafirin) waxaa badanaa maskaxdiisa ku soo dhacda Saudi Arabia oo dad badan oo Soomaali ah intay subax shaqo tageen ay isla habeenkii Soomaaliya ka soo hadleen.
Maraykanka oo lagu tirin jiray in uu ka mid yahay waddammada ay xorriayadu ka j
GANACSI - E-MAIL BEEN AH OO DHIBAATO U GAYSTAY MAKHAAYAD NIN CARAB AH LEEYAHAY
Makhaayadda la yiraahdo Shiikh waxay ku taal xaafada Orchard Lake oo ka mid ah xaafadaha magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Agagaarka ay makhaayaddu ku taal waxaa ku nool dad Yuhuud ah oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 oo qof iyo dad Carab ah oo iyagana lagu qiyaasay 95,000 oo qof.
CAYAARAHA - BARNAAMIJKA XIDDIGAHA: CUMAR RINGO (QAYBTII LABAAD)
Shiikha: Naadigaagii caan baxay ee Dawladda Hoose \_"Munishiibiyo goorma ayaad ku biirtay?
Cumar: 1dii Maarso 1971-kii ayaan ku biiray Naadigii Munishiibiyo oo waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii lagu aasaasay.?
Kolombo: waxaa jira in sidaan la wada socono dalka Soomaliya ay dagaalo sokeeye iyo mashaakilaad badani ka dhaceen. Intii aan dagaalladu dhicin, waliba xilliyadii dambe waxa
CAYAARAHA - QUBANAYAAL
Cayaaraha -? Qubanayaal
Taariikhda Kubbadda Koleyga Ee Maraykanka.?
Diyaariye: Cabdullahi N. Maxamed \_" Kolombo\_"
Ciyaarta kubbadda koleyga ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee daawadayaashu ay aadka u xiiseeyaan, waxa
CASHARKII 2-AAD EE BARASHADA HTML
Basis HTML Codes (koodadka aasaaska u ah Protokoolka HTML)
Sida aan horeyba ugu soo sheegney casharkii 1-aad ee koorsadan HTML-ka ah ee ku soo baxey Somalinet.com magaalkoodii Maarso 2002. HTML Codesku waa waxyaabaha ugu muhiimsan Baratakoolkan HTML.
Kodadka HTML waa amarro (